Danjiraha Somaliya Ee Qaramada Midoobay Oo La Filaayo Inuu Golaha U Gudbiyo Warbixin Uu Kaga Cabanaayo Saldhiga Berbera Imaaraadka Laga Siinaayo.
Thursday March 16, 2017 - 14:12:15 in Wararka by
New York(CYN)Danjiraha Somaliya u fadhiya Golaha Amaanka ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socda Golahaasi u gudbiyo qoraal uu kaga cabanaayo saldhiga ay dawlada Imaaraadku ka dhisanayso magaalada Berbera ee Somaliland.
Danjiraha oo u waramaayey qaar kamid ah warbaahinta ayaa sheegay inay diyaariyeen qoraal ay kaga dacwoonayaan saldhigaasi Imaaraadku ka dhisanaayo magaalada Berbera ee gobolka Saaxil, isaga oo ku eedeeyey Imaaraadka inuu ka dhego adaygay hadaladii dawlada Somaliya.
Danjiraha ayaa sheegay inay qoraalkaasi dacwada ah sidoo kale u gudbinayaan jaamacadda Carabta oo ay ka dacweynayaan dalka Isu Taga Imaaraadka oo isaga laftiisu jaamacaddaasi kamid ah.
Dawlada Somaliya ayaa bilawday dacwado ka dhan ah saldhiga ciidan ee ay Somaliland Imaaraadka ka siisay magaalada Berbera, kaas oo kamid noqon doona saldhigyada ku yaala Geeska Afrika ee dawlada shisheeye ku lee yihin.
Saldhigaasi waxa dagaal adag kula jira dawladaha Jaarka, gaar ahaana dawlada Somaliya iyo Jabouti oo labadooduba wada olole ay ku doonayaan inay ku dhiciseeyaan saldhigaasi.
Iyada oo dhowaan la filaayey in Barlamaanka Somaliya la horkeeno mooshin saldhigaasi lagaga hadlaayo ayaanay taasi dhici ka dib markii ay dawlada Imaaraadku u gudbisay Somaliya Hanjebaad.